Jabulela unyaka omusha 2015 – Yini ekule esitolo?
January 1, 2015 by okunikezwayo 3 Amazwana
Just wayefuna ukwenza writeup esheshayo ngalokho zici esihlelelwe unyaka ozayo:
Umhleli okubhaliwe string – lesi sici mayelana 80% ephelele manje, it ikuvumela ukuba ubone strings ifakwe ku-database futhi enze ezinye izenzo kulabo. Izinto manje kanzima kakhulu ezifana ususe zonke izinguqulo kusukela umhumushi olulodwa uyoba snap. Lesi sici kulindeleke ukuba kukhululwe emasontweni ambalwa.
Ukusekela for amawijethi lwemibhalo uploads – custom widget abalobi babe ibihlala ikhala (futhi kufanele) mayelana lokuthi ngcono siphoqelela a Faka of the amawijethi. Umqondo oyinhloko kuyoba ukuvumela abanye amafayela ukuhlala khona futhi ugweme lokho kokuhlupheka. Lokhu futhi kungenzeka kuvule ithuba Downloadable iwijethi lwemibhalo okuyokwenza siphe choice more of amawijethi ngaphandle emali usayizi wefayela plugin.
Umhleli Frontend string – lokhu kuzodala interface abanye izintambo ekhasini, ukuthi nakuba “WYSIWYG” uyovumela ezinye ukuqhutshwa komsebenzi okungcono, ikakhulukazi mayelana uhlela strings meta kanye nezinye strings ezifihliwe, nabathile inhlanhla, Ajax izinguqulo uyophinde kuhleleke emva kwalokhu ngcono. Lona kuzothatha izinyanga ezimbalwa ezizayo.
Inani support system – lesi sici uyovele ukuhumusha izinombolo kusukela European uhlelo inani to Arabic and Hindi izinhlelo (futhi mhlawumbe-alcohol). Not a sici esibucayi kodwa isici nice iyeza maduze ukuze bohlahleli eduze nawe.
WP Imenyu ukuhlanganiswa – hhayi abukhali kakhulu ngokoqobo lokhu, engenzeka, nobukulu not.
Noma iyiphi imibono kanye nemibono zizosiza ngezansi, uma benza umqondo sizofaka ukuba workplan yethu. Uma ngempela ufisa ukugqugquzela isici ungase axhase esephepheni, xhumana nathi nge ifomu.